Ciidamada Xoogga dalka oo gacanta ku dhigay gaari qaraxyo laga soo buuxiyey (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO Ciidamada Xoogga dalka oo gacanta ku dhigay gaari qaraxyo laga soo buuxiyey...
Ciidamada Xoogga dalka oo gacanta ku dhigay gaari qaraxyo laga soo buuxiyey (Sawirro)
Ciidamada Xoogga Dalka gaar ahaan ururka 5aad, Guutada 16aad ee Kumaandooska Danab iyo Ciidanka Hay’adda Sirdoonka & Nabadsugida Jubbaland, ayaa soo bandhigay Hub iyo Qaraxyo ay ku soo qabteen Howlgallo ay ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan Gobolka Jubbalad Hoose.
Howlgallada ayaa si gaar ah looga fuliyey degaanada Beerxaani, Qudus, Dharkeyn Urur, Yaaq dabayl iyo Barjalla oo ka wada tirsan gobolka Jubbada hoose.
Saraakiisha Ciidamada ee Hoggaamineysay Howlgalka ayaa sheegay in ay burburiyeen Taliskii Qaraxyada ee Al-shabaab ku lahaayeen Jubbalada Hoose, isla markaasna gacanta ku dhigeen Hub, qaraxyo iyo Gaadiid.
Sidoo kale, saraakiisha ayaa sheegay in inta uu howlgalka socday ay dileen laba xubnood oo ka tirsan Al-shabaab, isla markaasna ay nolol ku qabteen afar kale.
Previous articleMaxaa looga hadlay kulanka Xamsa Cabdi Barre la qaatay Farmaajo? (Sawirro)
Next articleBasaasiinta Ruushka ee Internetka oo beegsaday 42 dal oo xulafo la ah Ukraine